Spotify dia hanolotra fameram-potoana hampiato ny playback | Androidsis
Spotify dia hampiditra fameram-potoana hamerenana ny playback
Spotify dia efa nampiditra fampiasa vaovao amin'ny fampiharana Android efa elaela. Ny fampiharana fanta-daza dia nanolotra ny fahafahan'ny sakano ny mpanakanto taloha kelin'izay. Ankoatr'izay, Android dia nampidirina miaraka fampiharana amin'ny famantaranandro google, mba hahafahantsika mampiasa hira ho famantaranandro fanairana amin'ny fomba tsotra. Hanomboka fampiasa vaovao tsy ho ela ny fampiharana.
Amin'ity tranga ity dia a famaranana hamaranana ny famerenana mozika. Amin'izany fomba izany, ny mpampiasa dia afaka manapa-kevitra ao anatin'ny hafiriana izy ireo te-hijanona tsy milalao mozika amin'ny Spotify amin'ny telefaona. Efa mandeha ny fitsapana voalohany amin'ity asa ity.
Na dia amin'izao fotoana izao aza dia tsy fantatsika ny daty hampahafantarana azy io amin'ny fomba ofisialy amin'ny fampiharana malaza. Farafaharatsiny fantatsika fa efa an-dàlam-pamokarana izy io ary anaovana andrana mba hahitana ny fomba fiasa. Amin'io lafiny io, Spotify dia hanome safidy maromaro hisafidianana amin'ny resaka ora.
Ka raha ny mpampiasa tsy te hihaino mozika mandritra ny fotoana iray fotsiny ianao (ohatra raha mandeha hazakazaka adiny iray ianao). Na alohan'ny hatory, ka ny mozika dia milalao mandritra ny fotoana voafaritra mandra-pahatongan'ilay olona matory, ohatra. Azo ampiasaina amin'ny toe-javatra samihafa izy io nefa tsy misy olana be loatra.
Raha tsy misy fisalasalana, mety ho fiasa izay mety amin'ny mpampiasa Spotify maro amin'ny Android izy io. Ny timer dia miditra amin'ireo faritra izay azo jerena amin'ny sary: ​​5, 10, 15, 30, 45 ary 60 minitra. Noho izany, afaka misafidy amin'ireo safidy ireo ianao rehefa mampiasa an'io asa io ao.
Tsy manana fampahalalana bebe kokoa momba ity asa ity izahay ao Spotify. Ny iray amin'ireo fisalasalana lehibe dia ny hoe ho an'ireo mpampiasa manana drafi-fandoavam-bola ve izany sa raha afaka mankafy azy io daholo ireo mpampiasa ilay fampiharana. Tsy nisy na inona na inona voalaza momba ny orinasa amin'izao fotoana izao. Ka manome ny fahatsapana fa tsy maintsy miandry ela kokoa isika vao hahalala ny momba azy rehetra. Amin'ny daty hanombohana azy dia tsy nisy voalaza.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Spotify dia hampiditra fameram-potoana hamerenana ny playback
Ny WhatsApp dia hisakana antsika tsy hanampy vondrona ao amin'ny fampiharana raha tsy mahazo alalana aminay
Ny Sony Xperia XA2 dia manomboka manavao ny Android Pie